Ny zotram-piaramanidina amerikana dia mandà tsy ara-dalàna ny 25% -n'ny fitakiana onitra ataon'ireo mpandeha
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Ny zotram-piaramanidina amerikana dia mandà tsy ara-dalàna ny 25% -n'ny fitakiana onitra ataon'ireo mpandeha
Airlines • Airport • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Vondrona mpiaro ny zon'ny mpanjifa dia namoaka ny valin'ny fanadihadiana vaovao mampiseho fa ny zotram-pitaterana an'habakabaka amerikana dia mandà ny 25% mahery ny fitakiana onitra, izay manondro fa mihoatra ny iray amin'ny mpitsangatsangana dimy no lavina hatramin'ny $ 700 azon'ny Delta Air Lines, United Airlines. , ary American Airlines taorian'ny fikorontanan'ny sidina.
Isan-taona dia mihabetsaka ny mpandeha sidina miala an'i Etazonia no afaka mangataka onitra araka ny lalàna Eoropeana EC 261 izay mandrakotra ny mpandeha amin'ny sidina eropeana. Ny AirHelp dia nahitana mihoatra ny 25% ny fitakiana marina napetraka tamin'ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka amerikana noho ny sidina mikorontana tamin'ny taona 2016, 2017 ary 2018 dia nariana noho ny antony tsy marina nataon'ireo kaompaniam-pitondrana manalavitra ny adidiny amin'ireo mpandeha.
Ny traikefa amin'ny dia dia miharatsy hatrany hatrany noho ny fandehanana diso tafahoatra. Any Etazonia, mpandeha 407,000 no afaka mangataka onitra amin'ny EC 261 taorian'ny fahataran'ny sidina sy ny fanafoanana niainany tamin'ny taon-dasa, raha oharina amin'ny 370,000 tamin'ny taona lasa. Nandritra ny telo volana voalohany tamin'ny taona 2019, mpandeha maherin'ny 75,000 no niharan'ny fanakorontanana noho ny fahotan'ireo kaompaniam-pitaterana nahatonga azy ireo hanana onitra.
Ity fironana ity dia ampahany kely amin'ny laharana lehibe amin'ireo zotram-piaramanidina mampijaly ireo mpandeha. Ny fanadihadiana nataon'ny mpandeha dia nahatsikaritra fa tsy nahazo vaovao momba ny zon'ny mpandeha an'habakabaka ny 75% amin'ireo mpandeha amerikana, ary latsaky ny 25% ny mpandeha izay nisidina sidina no nametraka fitakiana, na dia takian'ny lalàna aza ny zotram-pitaterana hampahafantatra ny zon'izy ireo.
Ahoana ny fiorenan'ny US Airlines
Amin'ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka amerikana, ny Delta Air Lines dia mandà ny tsy fitakiana betsaka indrindra amin'ny taha iray amin'ny telo. Ny United Airlines dia mandà tsy misy diso ny iray amin'ny fitakiana efatra, ary ny American Airlines dia mandà ny iray isaky ny dimy. Araka ny laharana isan-taona an'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka sy seranam-piaramanidina eran-tany, dia tsy nahagaga ny fahombiazan'ny zotram-piaramanidina amerikana, ka ny mpitatitra lehibe tsirairay dia nahazo latsaky ny fito amin'ny 10 ho an'ny kalitaon'ny serivisy.
Ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka amerikana malaza indrindra amin'ny laharan'ny fangatahana nolavina diso
Laharana amerikana laharana manerantany ho an'ny tahan'ny fangatahana nolavina diso
Diso diso hevitra ny tahan'ny fangatahana
1 32 Delta Air Lines 32%
2 42 United Airlines 23%
3 44 American Airlines 22%
Data avy amin'ny 1 Janoary 2016 ka hatramin'ny 31 Desambra 2018
“Ny sary manjombona any Etazonia dia ny tendron'ny iceberg fotsiny. Mampihoron-koditra ny habetsaky ny filazan'ny mpandeha ara-dalàna izay nolavin'ny seranam-piaramanidina tsy ara-dalàna. Ny fanemorana ny sidina sy ny fanafoanana dia miha-mitombo hatrany ny korontana amin'ireo mpandeha, ary voatery miady amin'ny seranam-piaramanidina ny mpandeha mba hahazo onitra tokony haloany, ”hoy i Henrik Zillmer, tale jeneralin'ny AirHelp. “Tena tsara ho an'ny seranam-piaramanidina ny milaza fa hanonitra ny mpandeha manao ny fitakiany mivantana izy ireo. Ny tena izy dia mpandeha an'arivony maro no manohy miatrika tolona tsy azo atao hitaky ny vola zon'izy ireo. Raha tafiditra ao anaty ady ara-dalàna miaraka amin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka izy ireo, dia mety hiatrika vola ny mpandeha raha hanakarama mpisolovava hanosika ny fitakiany, izay mety hahatonga ny ady ho tambiny tsy ho vita mihitsy. ”
Zon'ny mpandeha amerikana
Ny mpandeha amerikana dia voaro amin'ny alàlan'ny EC 261 amin'ny sidina mankany amin'ny EU amin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka EU, ary ny sidina rehetra miala amin'ny EU. Ny sidina nofoanana, ny fanemorana adiny telo mahery, ary ny tranganà fandavana tsy hiditra dia saron'ny EC 261, raha toa ka tsy ny toe-javatra miavaka toa ny toetr'andro, ny sabotage na ny korontana politika no nahatonga izany korontana izany. Ireo mpandeha azo ekena dia afaka mahazo onitra ara-bola hatramin'ny $ 700 isan'olona, ​​ary afaka mametraka fitakiana hatramin'ny telo taona aorian'ny nitrangan'ny tranga.
Ny mpitsangatsangana dia manana fiarovana vitsy kokoa amin'ny sidina amerikanina any an-toerana, saingy afaka mangataka $ 1,350 ho tambin-karama noho ny fandavana noho ny famenoana be loatra, miankina amin'ny sandan'ny saran-dalan'ny tapakila sy ny fahatarana farany amin'ny fahatongavany any amin'ny toerana farany halehany.